Update: Xildhibaanada Galmudug oo Jawaahir Axmed Cilmi u doortay Kursiga Lixaad ee Xubnaha Aqalka Sare kadib Tartan adag | Kismaayo24 News Agency
Sunday October 16, 2016 - 9:58 under Somali News by Tifaftiraha K24
Magaalada Cadaado ee xarunta KMG maamulka Galmudug Waxaa ka socota doorashada xubnaha Aqalka Sare u matalaya maamulka Galmudug , waxaana xubnahaasi dooranaya Golaha Wakiilada maamulka Galmudug.
Hoolka ay ka socoto doorashada ayaa waxaa soo buux dhaafiyay Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka galmudug iyo korjoogayaal doorashooyinka ah , waxaa Shalay Xildhibaanadu ay doorteen Shan xubnood ,iyadoona maanta ay dib ubilaabatay doorashada ayaa durbadiiba xildhibaanadu ay doorteen Kursigii Lixaad ee aqalka Sare umatalaya Maamulka Galmudug waxa ay Xildhibaanadu kursigaas udoorteen Jawaahir Axmed Cilmi kadib tartan adag oo ay la gashay Cabdisamad Macalin Maxamuud.
Xildhibaanad Jawaahir, ayaa waxaa tartan adag la galay Musharrixiinta kala ah En; Xasan Maxamuud Maxamed oo helay 37 Cod iyo C/samed Macallin Maxamuud oo aan wax Cod ah helin, halka ay Marwo, Jawaahirna heshay 51 Cod.
Jawaahir Axmed Cilmi, ayaa noqonaysa Xildhibaanaddi Labaad oo Dumar ah, kuna guuleysata inay ka mid noqota Aqalka Saree ee Baarlamanka Soomaaliya, xilkaas oo ay mu metelayso Dowlad Goboleedka Galmudug.
Shan xubnood ayaa Shalay ku guuleystay kuraasta Aqalka sare ee Baarlamaanka, kuwaasoo ay ka mid ahayd Zamzam Dahir Maxamuud, oo ahayd Gabadhii ugu horreysay ee Galmudug u metesha Aqalka Sare.